Swedan iyo shaqaalaha shisheeye - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Iswidhan iyo shaqalaha shisheeye Foto: Jens Nørgaard Larsen / SCANPIX
Swedan iyo shaqaalaha shisheeye
La daabacay torsdag 9 juli 2009 kl 09.47
Iswidhan waa dal leh soo jiidashada xagga shaqada ajanabiga ee leh tayada shaqo. Baahida iswidhishkuna waa shaqada tayada leh iyo xooga shaqaalaha taasoo ah mid sare u kaceedu lawada dhowrayo noqon karto mid soo jiidasho u leh xooga shalaaha ajanabiga ee loo bahan yahay.
Balse sida uu ku waramayo Thomas Brunk oo ah qabiir ka tirsan he’ada daraasada Oxford Reserch ayaa sheegay in tasi macnaheedu tahay sawirka wanagasan ee Iswidhan aanu aheyn mid si toos ah dadku u dooran iney u soo guuraan halkan.
Isagoo weli arrimahaasi ka hadlaya Thomas ayuu sheegay in Sweden tahay dal ku wanagasan in la dago lagana shaqeysto taasina aanu aheyn mid shaki ku jirta. Balse caqabada hor taagan in laga faa’iideysto imaanshaha halkan ay tahay mid u baahan in la helo warbixin ku saabsan suuqa shaqada.
Sida ay ku warameyso warbixin ay si wada jir ah diyaarinteeda iskaga kaa shadeen hey’ada daraasada Oxford Reserch iyo ganacsiga iyo warshadaha dalkan ee loo yaqaano Näringsliv ayaa sheegay in tayada nolosha iyo damaanada shaqsi ahaaneed ee iswidhish-ka aqoonta xagga luqadeed iyo shaqadaba ay yihiin kuwo soo jiidaya tayada shaqo iyo xooga shaqo ee Iswidhan looga baahan yahay.
Sidaas oo ay tahay dadkii ka qeyb qaatay daraasadan ayaa u sababeynya ka qeyb qaadashada howshan ee la xirriirta bulshada, iney tahay sideedaba mid adag in la abuuro xirriir lala yeesho iswidhish-ka iyo dhexgalka mujtamacan. Mida kale ee caqabadaha ah ayaa kamid ah fahanka maciishada nolosha iyo canshuurta oo halkan ah mid aad u sareysa.
”Dalabka baahiyadeed ee ay iswidhish-ku u qabaan awooda shaqaalaha shisheeye ay tahay mid sii kordheysa” ayuu yiri Henrik oo ah madaxa daraasada hey’ada la yiraahdo Sydsvensken Handelskammaren isagoo carabka ku adkeeyey culeyska ay leedahay in la helo xooga shaqaalaha shisheeye.
Ma ahan oo keliya shirkadha iswidhish-ka waxa u baahan awooda shaqaale tayo shaqo leh. Balse dhaqdhaqaayada caalamka ayaa iyagana ka dhigaya mid baratanka ka dhaxeeya uu yahay mid adag. Dalalka dunida horumaray ee leh warshadaha weli waxey leeyihiin nimadaamkii xagga da’da ku saleysnaa., Taas oo ayaaha dambe ee dalkan ka dhigeysa mid u baahan da’da yarta shaqaalaha sida mowdajaha badda oo kale iyo kuwa dhaxe ay ka cararayaan deegaanada Norrländska.
”Haa waanu nahay oo weliba waxaanu nahay booska daraasada ku saleysan dadka iyo isku geynta isbadalada ku saleysan kobcinta ee sameynaya in loo baahan yahay xooga shaqada sanadaha soo socda, marka dhamaan dadka afartan jirada ah ay galaan howlgabnimada halka kuwa kale ee iyagana ah labaatan jirada iyo afartan jirada ay u guuraan meelo kale oo dalkan kamid ah, sidaas aawadeed waa inaan helnaa awooda shaqaalaha ajanabiga ah si looga baxsado tan guud ee u wada dhaxeysa. Si aan hadana aan u siino adeega ay u baahan yahay waayaladeena ,carruurteena dhigata dugsiyada iyo shirkadaheena laftooda” aey tiri Karin Stierna oo ka tirsan xisbiga dhexe islamarkaasina ah xildhibaanad muujisay in kor u kaca awooda xooga shaqaalaha ajanabiga ah.